Store Assiatant Archives - Glory Assumption Space
၁) Store ( Assistant ) – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ။
၁) Store ( Assistant ) – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၂ ) နှစ် ရှိသူဖြစ်ရပါမည် ။ • Store ( Electrical ) ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရပါမည် ။ • မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။ • Microsoft Word , Excel , Pagemaker တတ်ကျွမ်းရပါမည် ။ • သွက်လက်တက်ကြွ၍ ဌာန အားလုံး နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည် ။ • ဖယ်ရီရှိပါသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Engineering Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Store Assistant – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Store Assistant – Female (5)Posts /လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၀) မှ (၂၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - ကွန်ပျူတာအခြေခံကျွမ်းကျင်ရမည်။ - စတိုပစ္စ္စည်းအ၀င်၊အထွက်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Store Assiatant, Female/ Male ( 20 post )
Store Assiatant, Female/ Male ( 20 post )/ 120,000 - 150,000 Kyats >> ThinGanGyun Township << Age 20 - 28 years Above 1 years experience in related field Matriculation passed (or) any graduate Email - gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com. Phone No- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 Company Address : No. 29, First Floor, Khaing Shwe Whar Street, 1Ward, Hledan, Kamaryut Township.